Lavrov oo booqanaya Syria - BBC Somali
Lavrov oo booqanaya Syria
Image caption Lavrov, Asad
Socdaalka Mr Lavarov ayaa imanaya maalin kadib markii Mareykanka uu xirey safaaraddii uu ku lahaa magaalada Dimishiq, iyadoo Britainna ay dib ugu yeeratey danjiraheedii ka fadhiyey Syria.
Dalalka reer Galbeedka ayaa aad uga careysan talaabadii Ruushka iyo Shiinaha ay codka Veto-ga ku diideen qaraar Golaha Amaanka la hordhigey oo looga dalbanayey dowladda Madaxweyne Bashar Al Asad inay joojiso dilka shacabka iyo rabshadaha socda.
Laakiin afhayeen u hadley wasaaradda arrimaha dibedda ee Iiraan Ramin Mehmanparast ayaa difaacey talaabada Shiinaha iyo Ruushka kuna tilmaamey mid wax ku ool ah.
Mucaaradka ayaa aad u dhaleeceeyey khilaafka soo kala dhexgaley xubnaha Golaha Amaanka, waxayna sheegeen in go'aanka Shiinaha iyo Ruushka ay codka Veto ku horjoogsadeen qaraarka Qaramada Midoobey uu ku dhiirigeliyey dowladda Syria inay kordhiso weerarada ay ka waddo magaalada Homs.
Kumanaan ka tirsan taageerayaasha Madaxweyne Assad ayaa safnaa waddooyinka magaalada Dimishiq iyagoo lulaya calamo markii gawaaridii gelbineysey Mr Lavrov ay magaalada dhex marayeen.
Mr Lavrov waxaa uu sheegey in jawaabta reer galbeedka ee codka Veto-ga Ruushka laga dheehan karo cabsi iyo khalkhal ku yimid waddamadaasi.
Xafiiska Mr Lavrov's ayaa sheegey in ujeeddada socdaalkiisa Dimishiq uu yahay in Ruushku doonayo in degdeg xasilooni iyo nabad loogu soo dabaalo Syria.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Koonfuur Africa ayaa ku boorisey xukuumadda Syria in ay si nabadeed ku xaliso xarasadda dalkeeda ka aloosan.